Chirikadzi Chirikadzi yakasimudzwa | MyWeedSeeds.com
Chirikadzi Chirikadzi - yakasimba kwazvo pasirese (yepamusoro THC%) mbanje. Mukundi wemikombe yakawanda kupfuura chero imwe mhando. Wepamusoro maficha pane ese akanakisa eDutch kofi shopu menyu. Akarova nhanho muma1990 - muchinjikwa pakati peIndia indica neBrazil sativa - uye anga ari nyeredzi kubva ipapo. White Chirikadzi inowana zita rayo nekugadzira akawanda kwazvo, anopenya, makirisito eTHC ayo machena machena anoita anofukidza girini yemuti wake. Ari wepakati kureba, aine yakanakisa shizha-kune-bud chiyero. Iye akasimba uye achabudirira mumba, panze, kana mune greenhouse. Iye akanyatsokodzera kune vanoverengeka varimi uye vanodiwa kune vanoziva. Chirikadzi Chena inozivikanwa nekunhuhwirira kwayo kwakasimba, kunotapira-asi-kunoruma, kuita kunge maapuro akaora apo painooma. Iko kuravira kwake kunoita kunge zvihwitsi, aine nyowani, zvishoma muchero kupera. Hutsi hwake hwakasimba asi haurume. Iwe unozonakidzwa nekukwirisa kwake kukwirisa, musanganiswa wekusimudzwa uchidziirwa nenyaradzo yekudenga. Akasununguka kwazvo uye akarara-kumashure asina kana kuneta.